Rakhiyeyaasha Bacriminta Alaab-qeybiyeyaasha Mashiinka Baadhista ah iyo Warshadda | YiZheng
Ku Khadka Tooska ah ee gariirka waxay isticmaashaa il gariir xoog leh oo ka socota gariirka-matoorka, qalabka ayaa ku ruxaya shaashadda waxayna horay ugu socdaan qadka toosan.
Waa maxay Mashiinka Baadhitaanka Tooska ah?
Ku Khadka Tooska ah ee gariirka (Screen Line Vibrating Screen) wuxuu u adeegsadaa kicinta mootada gariirka sida isha gariirka si ay maaddada ugu ruxdo shaashadda oo ay ugu sii socoto saf toosan. Maaddadu waxay ka soo galeysaa dekedda quudinta ee mashiinka baaritaanka si siman feeraha. Dhowr cabbirro waaweyn iyo hoos ah ayaa laga soo saaray shaashad lakabyo badan ah waxaana laga sii daayaa goobaha ay ka kala socdaan.
Mabda'a Shaqada Mashiinka Baadhitaanka Tooska ah
Marka shaashadda toosan ay shaqeyneyso, isku shaandheynta iskumid ah ee labada matoor waxay keentaa gariirka kicinta inuu dhaliyo xoog xamaasad gadaal ah, taasoo ku qasbeysa jirka shaashadda inuu dhaqaajiyo shaashadda si joogto ah, si walxaha ku jira maaddadu ay u noqdaan kuwo faraxsan oo xilliyo kala duwan tuuraya. Halkaasna lagu dhammaystirayo hawlgalka baaritaanka maaddada. Shaashadda gariirka toosan waxaa wada matoor laba-gariir ah. Marka labada matoor ee gariirka leh ay si iskumid ah u rogmadaan oo ay isu rogayaan, xoogga xiisaha leh ee ka imanaya aaladda wax soosaarka ayaa midba midka kale kansal gareeyaa jihada dambe, iyo iskudarsanaanta xoogga kicinta jihada dheer waxaa loo gudbiyaa shaashadda oo dhan. Dusha sare, haddaba, dariiqa dhaqdhaqaaqa ee mashiinka shaandhada waa xariiq toosan. Jihada xoogga xiisaha leh wuxuu leeyahay xagal xagal leh marka loo eego dusha shaashadda. Marka la eego ficilka isku dhafan ee xoogga xiisaha leh iyo isku-kalsoonaanta maaddada, maaddada ayaa kor loo tuuray oo horay ugu booday dhaqdhaqaaq toosan oo dusha shaashadda ah, taas oo lagu gaarayo ujeeddada baaritaanka iyo kala soocidda maaddada.
Faa'iidooyinka Mashiinka Baadhitaanka Tooska ah
1. Daabacid wanaagsan iyo siigo aad u yar.
2. Isticmaalka tamarta oo hooseysa, buuqa yar iyo cimriga dheer ee shaashadda.
3. Xaqiijinta baaritaanka sare, awoodda wax-qabad ee ballaaran iyo qaab-dhismeedka fudud.
4. Qaab dhismeed dhammaystiran ku lifaaqan, dheecaan otomaatig ah, oo aad ugu habboon hawlgallada khadka isku imaatinka.
5. Dhammaan qaybaha jirka shaashadda waxaa lagu dhajiyay saxan bir ah iyo muuqaal (boolalku waxay ku xiran yihiin kooxaha qaarkood). Qalafsanaanta guud waa mid wanaagsan, adag oo lagu kalsoonaan karo.
Mashiinka Mashiinka Baadhitaanka Tooska ah ee Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Mashiinka Mashiinka Baadhitaanka Tooska ah
Hore: Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary
Xiga: Mashiinka Xambaara Suumanka Suunka